Yimaphi amaqiniso omlando angatholakala ezithombeni? I-Byliny nomlando
Izincwadi Zokubhala Nokubhala, Izinganekwane
Imfundo iyinhlangano ebalulekile yolwazi mayelana nokuphila kwabakhokho bethu, indlela yabo yokuphila, ukwenza umthetho, izindaba zempi, umthetho womndeni nezinye izici. Lokhu kuqondwa kahle ngabososayensi bokuqala. I-Bylins sekuyisikhathi eside isifundo sokufunda. Umbuzo oyinhloko abacwaningi abanentshisekelo: "Yimaphi amaqiniso omlando angatholakala ezithombeni?" Kwakukhona ukuthi kunezinto eziningi ezingokoqobo kubo njengenganekwane.
Ingabe i-epic isivela kude nangokoqobo
Akuzona zonke izazi-mlando ezibaluleke kakhulu ngomsebenzi wezinkinobho, zibhekwa njengezinganekwane. Yiqiniso, emlandweni, ama-dumas, inganekwane kanye nezinye izinto ezidaliwe, kunamaphuzu amaningi amnandi, abalingiswa abanjwe ngamakhono namandla angakaze abe khona, futhi ababi bademoni kakhulu futhi bahanjiswa nge-caricaturedly. Kodwa okwamanje ama-epics kanye nomlando akuzona imibono engahambisani nayo. Cishe emisebenzini ngayinye ye-folkloric ukuhumusha kwabantu kwalokhu noma lowo mcimbi womlando uhleliwe.
Asikwazi ukukhuluma ngokungakhethi kokhokho bethu. Imemori yokuqoqa yabhala kuphela lezo zikhathi ezazimnandi kuye noma zabonakala zifanelekile ukunakwa. Ngokuvamile izenzakalo zahunyushwa ngendlela yazo. Isibonelo, iqiniso elinjalo lomlando njengokubhujiswa kwe-Tartar horde yaseKiev, kuvame ukuguqulwa: abantu baseKiev basindisa isimangaliso, iqhawe elikhazimulayo, iNdodana. Noma, naphezu kokubhujiswa, idolobha lathola ngokushesha futhi lavuselela amandla alo angaphambili. Kubonakala kungalindelekile ukuthi ukubhujiswa kwangempela kwedolobha elilodwa elinamandla kwaholela ekuqaliseni kwezingqimba eziningi zamaqhawe, lapho iKiev iyinhloko-dolobha efanayo.
Yiziphi amaqiniso omlando angatholakala ezithombeni
Abantu bavusa imicabango ngalokho okwakuyithakazelisayo ekuqaleni - amandla ombuso wabo, ukuhlakanipha kombusi, izinga lokuphila, ukuvikela umbuso ngokumelene nezitha eziningi zangaphandle, umzabalazo wokulwa nezikhulu zendawo zonya nezingalungile nokunye okuningi. Konke lokhu okhokho bethu ababhekana nabo ngokuhlangenwe nakho kwabo. Futhi uma ama-epic ku-version yokuqala afika kithi, singakhuluma ngobufakazi obunzima bomlando (ngaphandle kokucabangela uhlobo oluthile lwe-hyperbolization). Kodwa njengoba lesi sigameko sathunyelwa ngomlomo, umlandeli ngamunye angafaka into yakhe futhi aguqule umbhalo.
Amaqiniso emlandweni kuma-epics, athole isiqinisekiso:
1. Ukubhujiswa yiMongol-Tatars yaseKiev.
2. I-Strife phakathi kwezikhulu e-Kievan Rus, okwaholela ekushonekeni kombuso onamandla.
3. Umzabalazo ongapheli wezinhlanga ezisezintabeni.
4. Ubhapathizo lwaseRussia.
5. Ukuhambela ndawonye eJerusalema.
6. Umkhankaso ongaphumeleli ngokumelene nezikhulu zika-Prince Igor nabanye abaningi.
I-Encyclopedia yokuphila kwansuku zonke kokhokho bethu
Emibhalweni yabaphikisayo: "Yiziphi amaqiniso omlando atholakala emaqenjini, uma kukhona inkolelo eyodwa?" - ososayensi banikeza impendulo engavumelani: kunezenzakalo ezingaphezulu ezingaphezu kwalokho ezingabonakala ekuqaleni. Ngaphezu kwalokho, ubuciko bomlomo womlomo ngumthombo obalulekile wokuchaza impilo yomndeni, imithetho, amadivaysi okuphatha, ibutho nezinye izingxenye zokuphila kobaba.
Isibonelo, kusukela e-Epic "Youth of Churila" sifunda ukuthi abasebenzi be-artel bafaka isikhalazo eKiev ngokumelene nenkosana yabo ngokubamba zonke izinhlanzi nazo zonke izilwane ezihlahleni bese bezinikezela kulabo abathengi.
Abathengi abafuna ukuthola imali ezweni lenkosi, kufanele bakhokhe imisebenzi, futhi inani ngalinye umbusi azibeke ngokuhlakanipha kwakhe. Esikhathini esibucayi ngeNdlovukazi yaseKorsun, abathengisi bakhononda isikhulu sabo ukuthi baphoqeleka ukuba banikeze intela kumfazi ohahayo kuzo zonke izinyathelo abazithathayo.
Kusuka kuma-epics mayelana neqembu lesikole sifunda ukuthi ibutho linombhalo ocacile. Enhlanganweni yezempi kungenzeka ukuthi ubanike iqembu elincane neliphezulu, amaqhawe, izinceku nabanye.
Kuningi okukhulunywa ngakho ngama-bylinas nangempilo yansuku zonke. Ngokwebuciko bomlomo womlomo sibona izincazelo eziningiliziwe zemikhosi ezenzeka emakamelweni obukhosi, izambatho ezinhle kakhulu zezakhamuzi zasezingeni eliphezulu, ukudla, izinsimbi zomculo nezinye izinto.
Bogatyri - abalingiswa bangempela noma abaqanjiwe
Amaqhawe amakhulu esiqhingini saseRussia amaqhawe. Abantu, abahlukunyezwa izitha zangaphandle, izakhi zemvelo, ukungabi nabulungisa kwezikhulu ezinonya kanye nezinye izinhlekelele, bafuna abavikeli. Yiziphi amaqiniso omlando angatholakala ezithombeni, ukuze bangabaze iqiniso labo? Yiqiniso, i-prototypes yangempela yamaqhawe amaqhawe.
U-Ilya Muromets, uDobrynya Nikitich, uSadko, u-Alyosha Popovich namanye ama-knights balwa kabi e-Old Rus. Amaqiniso amaningi agcinwa ngo-Ilya Muromets, kwaziwa ngisho nokuthi ithuna lakhe liseKie-Pechersk Lavra. UDobrynya Nikitich uvela eDrevlyane, wathathwa nodadewabo futhi wathunyelwa enhloko-dolobha. Wahamba ngendlela ende esuka encekwini eya ekulongweni. Ulwazi oluncane lwalukhona ku-Alyosha Popovich. Cishe, wafa empini emfuleni. Kalka.
Amaqiniso omlando eziqhingini ziye zabhalwa, ngakho-ke akukho sikhomba sokungabaza ubuqotho babo. Kufanele siziqhenyise ngokuthi okhokho bethu babehlakaniphile ngokwanele ukushiya ulwazi olubalulekile ezizukulwaneni ezizayo.
Isifinyezo se-Matteo Falconet ngu-Prosper Merimee
Izincwadi Zokubhala Nokubhala
I-Supermind Vulture (i-Marvel Comics)
Honore de Balzac: imisebenzi nokuphila komlobi omkhulu
Imigomo yokubhala ngomlomo, noma isifinyeto esifushane sezindaba zaseRussia.
Isifinyezo sikaGogol "I-Nose" - indaba ye-mystifier enkulu
Ukufingqa "I-Older Woman Izergil" kaGorky (ngezahluko)
Utamatisi Labrador: izici zokulima
Imfundo ezingokomoya nezokuziphatha zesikole abasebasha kudingeka
Indlela bageze ngaphambi kokuba namaz?
Alexander Gusev: wasemuva ngempumelelo
Ukubuyekeza: "Berroca". Izici ezinhle futhi ezimbi zevithamini eziyinkimbinkimbi, ngokusho odokotela
Mayelana umsuka Midge
Imbongi, owabhala lona leli vesi adumile "isitebhisi." A kancane mayelana Mayakovsky
Stoglavy Cathedral kanye Ivan Grozny
"Cossacks 3" - nezidingo zomshini
Cash imishini irejista. okubhalisa Fiscal - kuyini?
Gel sula "Comme il faut" - kukho isabelomali cost-bayazi
Oleg Karavaichuk: Biography, imisebenzi